गोरखाको बारपाक अलि फरक कारणले चर्चित छ अचेल । अढाइ वर्ष अघि ९ हजारको ज्यान लिनेगरी गएको भूकम्पको इपिसेन्टर थियो यो । त्यसअघि पनि ओझेलमा भने थिएन यो गाउँ । दोस्रो विश्वयुद्ध लडेर भिक्टोरिया क्रस पाएका गजे घले यहीँका थिए । उनकै नामकामले चम्किएको ठाउँ हो यो ।
प्रेसबाट आएको आफ्नो पहिलो पुस्तकको पहिलो प्रति उनले मलाई सगर्व र सहृदयका साथ उपहार दिन चाहे । सल्लाहबमोजिम हामीले चाबहिल चोकमा भेट्यौं र नजिकैको चिया पसलमा पस्यौं । सोह्र साँझ : युद्धका असरबीच यात्रा मलाई दिँदै गर्दा उनको अनुहारमा एक सफल योद्धाको अनुहारमा देखिनेजस्तो तेज थियो ।
नेपालको मध्यकालीन इतिहासमा राजा जयस्थिति मल्ल (सन् १३५४–१३९४ ई) को ठूलो महत्त्व छ । तत्कालीन समयमा अव्यवस्थित देशको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक इत्यादि क्षेत्रहरूमा समसामयिक अनेक सुधारहरू गरी एक प्रकारको व्यवस्थित शासन प्रणाली तथा सामाजिक रीति–व्यवहारको स्थापना यिनले गरेका थिए । परन्तु, यस्ता प्रख्यात राजाको वंश र परिवारबारे अहिलेसम्म निश्चित रूपमा भन्न सकिने अवस्था छैन ।
अब घुर बालेर बस्छ अकलुवा घुर !
भएर मात्र के गर्नु सजीव आाखाहरु ?जसले दुनियाादुश्मन, फूल–कााडा र तारामण्डल देख्छन् तर, मेरै धैर्यशील छातीमा लिखितशान्तिका सूत्र यिनले कहिल्यै पढेनन् ।
दुई महिनादेखि मैले केही लेख्न सकेकी छैन । डायरीका यी रित्ता पृष्ठहरू जति पल्टाउँछु उत्ति मनभित्रको खाली झन्झन् बढ्दै गएजस्तो लाग्छ । कस्तो खाली हो, म आफैं पनि जान्दिनँ । म दुब्लाइसकें, थुकसित कहिलेकाहीं रगत मिसिएर आउँछ, रातो आँखै तिरमिराउने कालो रगत ।
२०१७: ध्रुवीकरणको वर्ष
अमेरिकी राष्ट्रपति पदमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएको विषय सन् २०१६ को सबैभन्दा ठूलो चर्चाको विषय थियो, सायद । त्यही चर्चा २०१७ को सुरुआतमा पनि सेलाएन । उनले अमेरिकी राष्ट्रपति पदको शपथग्रहण गरेयताको विश्व राजनीति धेरै हदसम्म उनीसँगै ठोक्किन पुगेको छ ।
‘फ्री एट लास्ट’...
सन् १९५३ को एक उदास दिन इरानका राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री मोहमद मोसादे सैनिक कुमार्फत हटाइन्छन् । उनको अपराध थियो देशको तेल उद्योगहरू राष्ट्रियकरण गर्नु । त्यसपछि अमेरिकाको विशेष अनुग्रहमा चौतीस वर्षीय सैनिक अधिकृत रेजा सा सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुग्छन् ।
सन २०१७ मा प्रकाशित भएकामध्ये ‘बीबीसीडटकम’ ले उत्कृष्ट भनेका दस पुस्तक :
संखुवासभाको मादी मूलखर्कमा जन्मेका २९ वर्षीय निमेष गुरुङ सिंगापुर पुलिसमा भर्ती भएको ८ वर्ष लाग्यो । परिवारको आर्थिक अवस्था उकास्नै २०६२ मा कक्षा १२ को पढाइसकेलगत्तै लाहुर लागेका थिए उनी ।
‘मेसी र रोनाल्डो’ अनि ह्यारी केन
स्पेनिस ला लिगाअन्तर्गत विन्टर ब्रेकअगाडि माहोल तताउने एल–क्लासिको गत शनिबार सम्पन्न भयो । वर्षको अन्तिम खेलअघि विश्वका उत्कृष्ट दुई खेलाडी, रियल म्याड्रिडका क्रिस्टियानो रोनाल्डो र बार्सिलोनाका लियोनेल मेसी आफ्नो टोलीलाई विजयी बनाउन तत्पर थिए ।
सन् १८९५ को डिसेम्बर २८ मा लुमिएर दाजुभाइका छोटा फिल्म प्रदर्शन हुँदा विश्वभरि हलचल मच्चिएको थियो । तर, यही माध्यम पछि कलाक्षेत्रको सबैभन्दा प्रभावशाली विधा बन्छ भनेर कसैले सोचेको थिएन ।
विवाहेत्तर सम्बन्ध छुटाउने अस्पताल !
चीनमा नयाँ प्रकारको उद्योगको सुरुआत भएको छ, जसले श्रीमान्/श्रीमतीको आग्रहमा कुनै केटा/केटीसँग विवाहेत्तर सम्बन्ध (एक्स्ट्रा म्यारिटियल अफेयर) रहेका आफ्ना श्रीमान्/श्रीमतीलाई छुटाउन मद्दत गर्छ । यसरी अनैतिक सम्बन्ध छुटाउन श्रीमान् वा श्रीमतीले दसौं हजार अमेरिकी डलर तिर्ने गरेका छन् ।